Everestmission | हरपल खबर, निष्पक्ष विश्लेषण चालक दलका सबै सदस्यले सुतिरहेकी महिलालाई विमानभित्रै छोडे !
चालक दलका सबै सदस्यले सुतिरहेकी महिलालाई विमानभित्रै छोडे !
१० असार २०७६, मंगलवार १९:२४
एजेन्सी । एयर क्यानडाकी सुतीरहेकी एक यात्रीलाई चालक दलका सबै सदस्यले विमानभित्र छोडेर बाहिर निस्के ।
एयर क्यानडा विमानले उडान भरेपछि टिफनी एडम्स नाम गरेकी महिला महिला निदाइन् । जब उनको आँखा खोलियो तब विमानभित्र पूरा अँध्यारो थियो । त्यहाँ न यात्री थिए, न चालक चलका सदस्य । विमान पार्किङ एरियामा थियो ।
‘यो घटनापछि म निदाउन सकिरहेको छ । सुत्न खोज्दा झसङ्ग ब्युँझिने गर्छु,’ एडमले भनिन्, ।